Ikike zuru oke na ọdịnaya Ọsọ | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 19, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
E nwere ihe ịma aka nke na-emebi ụlọ ọrụ ugbu a. Ọ bụ ọsọ. Ngalaba ahia nke na-aga n'ihu ma na-agbanye ọdịnaya na ngwa ngwa na-aga nke ọma. Ngalaba ahia nke aru ojoo mebiri site na ozuzu oke adighi ike. O bu ilu mgbe ochie mbe na oke bekee.
Mbe na-enwe mmeri mgbe niile. Companieslọ ọrụ ndị mepụtara ihe doro anya, ozi zuru oke na onyonyo zuru oke na-aga n'ihu. Ndị ụlọ ọrụ na-enweghị akara siri ike ga-ahapụ behind na-enweghị ntụkwasị obi na ndị a na-ahụghị ka akara zuo oke zuru ohi na mmasị ha nwere mmasị.
Ebe ahịa gbanwere, agbanyeghị, ugbu a ndị ahịa na-ekwurịta okwu ma na-eme nchọpụta maka ihe ha zụrụ ọzọ, na-enye ọkwa ntakịrị (ma ọ bụ kredit) na ika ahụ. Ha, kama, na-achọ ndụmọdụ n'aka ndị enyi na ezinụlọ, nyocha site na ndị bịara abịa, ma chọọ ịmepe mkparịta ụka na ụlọ ọrụ kama ịgwa ha ka ha zigara ozi email ma ọ bụ email. Ha chọrọ azịza, ọ bụghị akara ngosi mara mma, weebụsaịtị, mgbasa ozi na slogans.
Ọsọ ndị ahụ dị mkpụmkpụ ma hares na-emeri ugbu a. A na-akwado ụdị ezughị okè - na ọbụlagodi ugbu a - ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ha na-enye atụmanya ahụ uru na nghọta. A logo, a slogan na a mara mma ngwaahịa ezughị n'oge a na-adọta ndị mmadụ. Kama nke ahụ, otu ndị na-enye nduzi na nduzi bara uru karịa ngwaahịa ahụ n'onwe ya.
Yabụ kedu nke ọ bụ? Mbe nke izu oke ma ọ bụ oke nke ọdịnaya ọsọ nke na-emeri n'ọsọ ahụ?
Echere m na oke bekee na-agba mbe. Branddị bụ akụkụ dị oke mkpa nke atụmatụ gị niile, mana mgbe izu oke nke ụdị ahụ na-egbochi ikike gị ịgwa ndị chọrọ ma na-eche ime ya, ị naghị ezute atụmanya nke ahịa gị. Ahịa ahụ na-achọ ka gị na ha na-ekwurịta okwu oge niile iji nye uru.
Ahịa anaghị achọ izu okè, ọ na-achọ azịza. Brandsdị nnukwu agwa ka nwere ike itolite, mana ọ gwụla ma ha nabatara ngwa ngwa nke bekee. The heres can drive a ton of business… ma ha kwesịrị ka zuru okè ha ika karịrị oge.
Ihe atụ ụfọdụ nke Brand over Speed:
Ndị ụlọ ọrụ ndị na-awụfe ihe ọmụma gbasara ihe ọmụma maka ọnwa iji dozie ihe niile. A na-ekekọrịta ihe ọmụma dabeere na ya ma nhazi na data. Ihe omuma ihe omuma obula agagh aga agha. Nweta infographic ahụ n'ebe ahụ, mụta site na nsonaazụ, wee bido ịmepụta nke ọzọ. Inweta ọkara akwụkwọ iri na abụọ iji zụọ ahịa nke dị mma ka mma karịa ịghara ị nweta ebe ọ bụla.
Ndị ụlọ ọrụ na-echegbu onwe ha banyere ịkọ akụkọ zuru oke nke na ha leghaara eziokwu ahụ anya na onye na-agụ ya anaghị achọ akụkọ ọ bụla. Ha nwere nsogbu ma ha na-achọ ihe iji dozie ya. Ọ bụrụ na idozi ya, ha ga-azụta ya. Y’oburu na ihe nile inwere bu akuko, igha agha gi nye ndi nwere azịza ha.
Ieslọ ọrụ ndị a akpachara crappy website na-adịghị na-arụ, na-ala azụ sere ahụ na-ekwusara a ọhụrụ website ahụ ka mma… ma ọ bụghị nke zuru okè. Ọ bụ egwu na ị na-arụ ọrụ na ịmepụta akụ, mana ugbu a ị chọrọ ihe na-arụ ọrụ. Mee ka ọ rụọ ọrụ, melite ka ị na-aga.
Lọ ọrụ anaghị echekarị gbasara ọsọ n'ihi na ha anaghị enwecha mmachi ego ha na-enweta n’efu na-efunahụ ha. Ka anyị na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ịkwanye ha ka ha bụrụ ndị agile, anyị na-enwekarị nkụda mmụọ na ọnụọgụ nkwụsị ndị mmadụ nwere, ọkachasị dabere na izu oke, tupu anyị adị ndụ. Ozugbo anyị na-ebi ndụ, ezie na, ụlọ ọrụ na-abịa ugboro ugboro wee sị… M chọrọ ka anyị gaara eme nke a ọnwa gara aga.
Anaghị m akwado maka ịchụrụ gị ika. M na-akwado imebi iwu n'etiti ọsọ na akara ka ị nwee ike bulie ma leverage ha abụọ iji meziwanye mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa.
Tags: brandcontent Marketingelekọta mmadụ mediaọsọatụmatụ